Shiinaha soosaarayaasha qalabka cabbiraadda heerkulka iyo alaab-qeybiyeyaasha | Chapman
✭ Marka laga soosaarayo qaybaha la isku duro ee ka samaysan caagagga, heerkulka caaryada ayaa saameyn ku leh tayada qaybaha iyo waqtiga wareegga. Xakamaynta heerkulka ugufiican inta lagu gudajiro waxqabadka heerkulka jirka ayaa sidoo kale saameyn toos ah ku leh waxtarka wax soo saarka.
✭ Caaryada cirbadeynta ayaa si isdaba joog ah loogu diiriyaa maadada la duray. Kuleylka waxaa lagu kala bixiyaa kuleylka kuleylka ee maaddada iyo birta caaryada ilaa dusha sare ee kanaalka kontoroolka heerkulka, halkaasoo kuleylka lagu siiyo iyadoo loo marayo wareejinta kuleylka ee wareejinta kuleylka wareegga (biyaha ama saliidda). Qaybta xakamaynta heerkulku waxay kala qaaddaa kuleylka qalabka gudbinta kuleylka waxayna dib ugu celisaa dhexdhexaadinta la qaboojiyey wareegga.
✭ Qaab-dhismeedkeena wasakhda ayaa ka samaysan S136 wax adag, oo nolosha caaryada waa inay gaarto 1 milyan oo jeer. In habka wax soo saarka wax taaj oo kale duray, waxaa lagama maarmaan ah si loo hubiyo saxsanaanta ee wax soo saarka, iyo in la hubiyo in ay tahay mid deggan oo adag inta lagu guda jiro geeddi-socodka shirka. Ka dhig qaybteena elektarooniga ah mid xasiloon.
✭ Haddii aad leedahay alaabooyin la mid ah, Fadlan ha ka waaban inaad nala soo xiriirto. Waxaan noqon doonaa lammaanahaaga ugu fiican.
Qaab MAYA. CPM-181013
Geedi-socodka Dhammaystirka Dusha sare VID21
Qalabka caaga ah PC + ABS
Miisaanka qaybta 23g
Cabbirka qaybta 125.00 X 63.00 X 22.00mm
Cabirka caaryada 346 X 396 X 337mm
Magaca Qaybta Qoriga xakamaynta heerkulka
Dalool caaryada 1 + 1
Wax caaryada S136
Waqtiga Hogaaminta 25maalmood
Qaab Wareega Waqtiga: 28-kii
Fogaanta: Isticmaalka aasaasiga ah ee heerkulbeegga infrared waa in laga cabbiro heerkulka maaddada meel fog. Qalabku wuxuu faa'iido u leeyahay xaaladaha ay adag tahay in la gaaro shayga si loo duubo heerkulka.
Tusaale ahaan, heerkulbeegga IR ayaa imaan kara markii la cabirayo heerkulka unugyada qaboojiyaha ee inta badan aan la gaari karin. Waxaad sidoo kale isticmaali kartaa heerkulbeeg infrared ah si aad ula socoto waxqabadka nidaamyada qaboojinta mishiinka ama aad u ogaatid meelaha kulkulul ee nidaamka korantada iyo baararka leh marin xaddidan.
Khatar ah: Cabbirka heerkulka meel fog wuxuu leeyahay faa'iidooyinkiisa. Dhammaan heer kulka lama cabiri karo iyadoo toos loola xiriirayo. Mid ka mid ah tusaalooyinka noocan ahi waa dhismaha dabka.
Dab-demiyeyaashu waxay inta badan isticmaalaan heerkulbeegga IR si ay u aqoonsadaan meelaha ay ku kulmaan haddii uu dab kaco. Qalabkan ayaa awood u siinaya inay helaan natiijooyin sax ah iyagoon naftooda khatar gelin.
Codsi kale oo heerkulbeegga ah oo aan lala xiriirin ayaa ah in lala socdo qalabka warshadaha sida kuleyliyaha, foornooyinka, iyo dhuumaha geedi socodka heerkulka sare. Qalabkan gacanta lagu qaato, shaqaaluhu waxay si ku habboon u hubin karaan dusha sare ee nidaamyadan heerkulka sarreeya iyada oo aan lala xiriirin toos.
Cabirka heerkulka aagagga sunta ah ama halista ah sidoo kale waa suuragal aaladahaan. Si kastaba ha noqotee, helitaanka heerkulbeegga saxda ah ee IR ee loogu talagalay tusaalaha saxda ah wuxuu muhiim u yahay akhrinta heerkulka saxda ah mid ka mid ah barnaamijyadan.
Dhaqdhaqaaqa: Heerkulbeegyada IR sidoo kale waa qalabka xulashada lagu cabbirayo heerkulka walxaha ku jira dhaqdhaqaaq joogto ah. Maaddaama qalabkani ay yihiin kuwo jawaab celin sarreeya, wax yar baa dib u dhac ku ah diiwaangelinta kala duwanaanta heerkulka. Sidan oo kale, heerkulbeegyada IR ayaa ku habboon cabbirka heerkulka walxaha dhaqaaqaya maaddaama xawaaraha sheyga uusan natiijada ka soo horjeedin.
Tusaalooyinka waxaa ka mid noqon kara cabbirka heerkulka suumanka wax lagu raro ee warshadda wax lagu farsameeyo, makiinadaha dhaqaaqa, roolayaasha, iyo walxaha kale ee dhaqaaqa halkaasoo ay lagama maarmaan u tahay xakameynta heerkulka.
Hore: Bangiga kaarka amaahda POS
Xiga: 34 iyo 4 isku xiraha pin
7day sanduuqa kaniiniga
Iyada oo qaybta PCBA plate plate